पवन टरबाइन वा पवनचक्कीले कसरी काम गर्छ? | हरियो नवीकरणीय
तर हावा बन्छ बिजुली? हालको प्रत्यक्ष antecedent हावा टर्बाइनहरू पुरानो हो मिलहरू, जुन आज पनि प्रयोग गरीन्छ, पानी निकाल्ने वा अन्न पिसाई जस्ता विभिन्न कार्यहरूको लागि। A पवनचक्की यो एक मेसिन हो जसमा ब्लेडहरू वा ब्लेडहरू हुन्छन् जुन सामान्य शाफ्टमा जोडिएको हुन्छ, जुन हावा चलेपछि घुमाउन थाल्छ।
यो घुमाउने शाफ्ट विभिन्न प्रकारका मेशिनरीमा जोडिएको छ, उदाहरणका लागि अन्न पिसाउनका लागि मेसिनरी, पानी पम्पि or वा बिजुली उत्पादन
पाउनु बिजुली, ब्लेडको आवागमनले विद्युतीय जेनेरेटर (वैकल्पिक वा डायनामा) चलाउँदछ जुन मेकानिकल उर्जा भित्र घुमाउने बिजुली पावर। बिजुली ब्याट्रीमा भण्डार गर्न सकिन्छ वा ग्रिडमा सिधा पठाउन सकिन्छ। अपरेशन एकदम सरल छ, के जटिल भइरहेको छ अनुसन्धान र निर्माणको हो हावा टर्बाइनहरू बढ्दो कुशल
1 हावा टर्बाइनका प्रकारहरू
2 ठाडो हावा टर्बाइनहरू
4 पवन टरबाइन वा वायु टरबाइनको गठन
5 एक पवन टरबाइन वा पवनचक्कीको इलेक्ट्रिकल उपकरण
6 ढिलोसँग तुलनामा छिटो हावा टर्वाइनको फाइदा
7 संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पवनचक्की
8 66 वर्ष को लागी एक घर को लागी पर्याप्त
एक पवनचक्की हुन सक्छ तेर्सो अक्ष, जुन आज सबैभन्दा सामान्य हो, वा त्यहाँ पनि छन् ठाडो अक्ष.
विकिपेडियाबाट परिभाषा ठाडो हावा टर्बाइनहरू वा क्षैतिज इलेक्ट्रिक जेनेरेटर चालुको रूपमा हावाको गतिज ऊर्जा रूपान्तरण गर्दै मेकानिकल उर्जामा र बिजुली उर्जामा हावा टर्वाइन मार्फत।
ठाडो अक्षको साथ ती अभिमुखिकरण संयन्त्रको आवश्यकता पर्दैन र विद्युतीय जेनेरेटर के हो भनेर भुइँमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अर्को तर्फ, तेर्सो अक्षको साथ ती, विस्तृत दायरा कभर गर्न अनुमति दिनुहोस् सानो पावरको पृथक अनुप्रयोगहरूबाट ठूला हावा फार्महरूमा स्थापनाहरू।
ठाडो हावा टर्बाइनहरू
उल्लेख गरिएको रूपमा, ठाडो वा ठाडो अक्ष पवन टर्बाइनहरू अभिमुखिकरण संयन्त्रको आवश्यक छैन, र विद्युतीय जेनेरेटर के हुन्छ भूमिमा अवस्थित पाउन सकिन्छ।
Su ऊर्जा उत्पादन कम छ र यसमा केहि साना विकलांगहरू छन् जस्तै यसलाई जानको लागि मोटर चालित गर्नु पर्छ।
सब भन्दा सामान्य समस्या मध्ये एक हावा टर्बाइनहरू यसको विशाल आकार हो, कम्पनहरू र शोरका साथै उनीहरूले उत्पन्न गर्छन्। यस कारणका लागि, तिनीहरू प्रायः घरहरूदेखि टाढाका क्षेत्रहरूमा अवस्थित छन्। यद्यपि, विश्वभरका कम्पनीहरू र वैज्ञानिकहरूले काम गर्न जारी राख्दछन् सानो टर्वाइनहरू बनाउनुहोस् (तपाइँ मिनी वायु उर्जामा पहिले लेख गरिएको सल्लाहमा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ), o मौन त्यो सहरी क्षेत्रमा अवस्थित हुन सक्छ।
तर समस्याहरू मध्ये एक जुन पिढीको क्षेत्रमा सबैभन्दा चिन्तित छ हावा ऊर्जा यो श्रोतको परिवर्तनशीलता हो, जुन हावाको हो। को टर्बाइन सामान्यतया, तिनीहरू अनुकूल रूपमा कार्य गर्न तयार हुन्छन् जब कुनै निश्चित हावा भित्र हावा बहन्छ गति दायरा। एकातिर, ब्लेडहरू सार्न निश्चित न्यूनतम गति आवश्यक हुन्छ, अर्कोतर्फ त्यहाँ पनि छ अधिकतम सीमा।
उदाहरण को लागी, सबै भन्दा सामान्य यो सीमा संग छ हावा गति प्रति सेकेन्ड and र २ meters मिटरको बीचमा। न्यूनतमलाई जडानको गति भनिन्छ, जुन कि कम बिजुली उत्पादन गर्न न्यूनतम हो, र अधिकतमलाई काट्ने गति भनिन्छ, जुन यो पहिले नै प्रतिक्रियात्मक हो, किनकि यसले मेकानिजमलाई भंग गर्न सक्दछ।
Un पवनचक्की एक्लै वा भित्र हुन सक्छ हावा फार्महरू, जग्गा बनाउँदा तटवर्ती हावा फार्महरू, समुद्रको तटमा वा तिनीहरू पनि भनिन्छ पानीको किनारबाट केही निश्चित दूरीमा स्थापना गर्न सकिन्छ अपतटीय वा अपतटीय वायु फार्म.
पवन टरबाइन वा वायु टरबाइनको गठन
त्यहाँ हजारौं हावा फार्महरू मोडेलले भरिएका छन् TEEH (तेर्सो अक्ष पवन टरबाइनहरू)। यी मेशिनहरू निम्न क्षेत्रहरू मिलेर बनेका छन्।
टावर र जग: टावर फाउन्डेशनहरू सपाट वा गहिरा हुन सक्छ, दुवै हावामा टर्वाइनको स्थिरता, नेसेल र मोटर ब्लेडहरूको कडाईको ग्यारेन्टी। फाउन्डेशनले हावाको भिन्नता र शक्तिले गर्दा हुने थ्रुस्टहरू अवशोषित गर्न पनि आवश्यक छ।
टावरहरू बिभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् उनीहरूको विशेषताहरूमा निर्भरता:
इस्पात ट्यूबलर: धेरै जसो हावा टर्बाइन ट्यूबलर स्टील टावरहरू द्वारा निर्मित छन्।
कंक्रीट टावरहरू: तिनीहरू उही स्थानमा निर्मित छन्, आवश्यक उचाइ गणना गर्न अनुमति दिएर।
प्रिककास्ट क concrete्क्रीट टावरहरू: तिनीहरू तयार टुक्राहरूद्वारा भेला हुन्छन् र तिनीहरूका खण्डहरू समान ठाउँमा राखिन्छन्।
जाली संरचनाहरू: तिनीहरू इस्पात प्रोफाइल प्रयोग गरेर निर्मित छन्।
संकर: तिनीहरूसँग टावरको बिभिन्न प्रकारका विशेषताहरू र सामग्रीहरू हुन सक्छन्।
बतासका साथ तनावग्रस्त मस्त टावरहरू: तिनीहरू सानो आयामको हावा टर्बाइनहरू द्वारा चित्रित छन्।
रोटर: रोटर प्रत्येक पवनचक्कीको "मुटु" हो, किनकि यसले टर्बाइन ब्लेडलाई समर्थन गर्दछ, जसले यान्त्रिक र रोटेशनल हिसाबले हावाको जोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ।
गोन्डोला: यो हावा टर्वाइनको सबै भन्दा देखिने टाउको हो, हेलमेट जसले सबै टर्बाइन मेशीनरीहरूलाई लुकाउँछ र मर्मत गर्दछ। गन्डोला टावरमा मिल्छ बीयरि using प्रयोग गर्दै हावाको दिशा पछ्याउन सक्षम हुन।
गुणक बक्स: हावाको भिन्नताहरूको सामना गर्न सक्षम हुनुको साथै, गियरबक्ससँग रोटरको कम रोटेशनल गति र जेनेरेटरको उच्च वेगको संयोजन गर्ने कार्य छ। जस्तो उहाँको आफ्नै शब्दले भन्छ; लगभग १18० आरपीएममा रोटरको प्राकृतिक चालले उत्पन्न गरेको १ generated-50० आरपीएम गुणा गर्न सक्दछ जब यसले जेनेरेटर छोड्दछ।
जेनेरेटर: यो विद्युतीय ऊर्जामा यांत्रिक ऊर्जा रूपान्तरणको प्रभारमा छ। उच्च-पावर टर्बाइनहरूको लागि, डबल फेड एसिन्क्रोनस जेनरेटरहरू प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि परम्परागत सिnch्क्रोनस र एसिन्क्रोनस जेनेरेटरहरू प्रचुर मात्रामा छन्।
ब्रेक: मेकानिकल ब्रेकहरू पावर ट्रेनमा प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूमा स्थिरको सiction्घर्षको उच्च गुणांक र कम्प्रेसनको लागि ठूलो प्रतिरोध आवश्यक छ।
एक पवन टरबाइन वा पवनचक्कीको इलेक्ट्रिकल उपकरण
आजको हावा टर्बाइनहरू ब्लेडहरू मात्र नभएर घरहरूमा सस्तो उर्जा दिन एक जेनेरेटरले बनेको छ। हावा टर्बाइनहरू पनि हुनुपर्दछ व्यक्तिगत विद्युत आपूर्ति प्रणाली र असंख्य सेन्सरहरू। उत्तरार्द्धले तापक्रम, हावाको दिशा, यसको गति र अन्य प्यारामिटरहरू जुन गोन्डोला भित्र वा वरिपरि देखा पर्दछ निगरानी र मापन गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
ढिलोसँग तुलनामा छिटो हावा टर्वाइनको फाइदा
तथाकथित "ढिलो वायु टर्बाइनहरू" को ठूलो फाइदा भनेको तिनीहरूसँग छ अधिक ब्लेडहरु त्यो रैपिडहरू र उनीहरूका सामग्रीहरू प्राय: हुन्छन् सस्तो। तर तपाईको समस्या के हो? तिनीहरूको ठुलो व्यास (to० देखि m ० मीटर सम्म) र घुमाउरो भए जसको टाउको १०० मिटरमा छ छिटो हल्का छन् ढिलो भन्दा
यो उच्च-उर्जा जनरेटर (०. to देखि M मेगावाट) लाई धन्यवाद छ जुन हावाको उचाइ-उर्जा अनुपातको अझ बढी फाइदा लिन्छ।
हल्का भएकोले, ब्लेडहरू चाँडो सारिन्छ, त्यसैले आकार र गुणक बक्स लागत कि इलेक्ट्रिक जेनरेटर ड्राइव कम गरिएको छ.
थोरै ब्लेडहरू भएकोले, यी अधिक सजीलो रूपमा हावाको विशेषताहरु अनुसार तिनीहरूको शक्ति अनुकूल गर्न समायोजित गर्न सकिन्छ। छिटो हावा टर्वाइनहरू प्रतिरोधात्मक हिसाबले राम्रो हुन्छ तनाव वायु gusts को कारण। स्टेशनरी रोटरमा हावाको कार्यको कारण अक्सिअल थ्रस्ट वेगको वायु टर्वाइनमा घुम्ने भन्दा कम हुन्छ; विपरीत मा हुन्छ ढिलो हावा टर्बाइनहरू।
संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पवनचक्की
भेस्टासले विश्वको सबैभन्दा ठूलो वायु टर्बाइनको अपडेट प्रस्तुत गरेको छ। यो टर्बाइन कत्तिको ठूलो छ भनेर वर्णन गर्न मसँग कुनै विशेषणहरू छैन। V164, एक 220 मीटर पवन चिलको साथ -38-टोन, -०-मीटर लामो ब्लेडहरू, भर्खर डेनमार्कमा नवीकरणीयमा रुचि राख्ने सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
अघिल्लो टर्बाइनले M मेगावाटको बिजुली प्रदान गर्न सक्षम थियो, र अपडेटहरूको लागि धन्यवाद छ जुन अब सम्म पुग्न सक्षम छ9मेगावाट विशिष्ट सर्तहरूमा उत्पादन। यसको पहिलो परीक्षणमा, V164 थियो मात्र २ 216.000 घण्टामा २१24,००० किलोवाट प्रति घंटे उत्पादन गर्न सक्षम.
यो एकल पवनचक्की द्वारा हावा उर्जा उत्पादनको पूर्ण रेकर्ड मात्र होईन, तर यो साघुँ प्रदर्शन हो कि समुद्री बतासहरू जाँदैछन्। ऊर्जा स transition्क्रमणमा कुञ्जी भूमिका जुन पहिले नै चलिरहेको छ।
66 वर्ष को लागी एक घर को लागी पर्याप्त
Torben अनुसार Hvid लार्सन, Vestas CTO:
"हाम्रो प्रोटोटाइपले अर्को जेनरेशन रेकर्ड सेट गरेको छ, २१216.000,००० किलोवाट प्रति घण्टा २ 24 घण्टाको अवधिमा उत्पादन भयो। हामी विश्वस्त छौं कि यस M मेगावाटको टर्बाइन बजार तयार छ भनेर प्रमाणित भएको छ र हामी विश्वास गर्दछौं कि यसले अफशोर वायु उर्जा मूल्य घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। "
सामान्यतया किलोवाटको बारेमा कुरा गर्नु अलि गाह्रो र अमूर्त हुन्छ। तर आधिकारिक निकायका अनुसार एक स्पेनिश घरको औसत विद्युत खपत प्रति वर्ष 3.250,२XNUMX० किलोवाट छ। दक्षिण अमेरिकाको मुख्य शहरहरूमा सहरी आवासहरूको औसत वार्षिक खपत भन्दा अलि बढी। यसलाई ध्यानमा राख्दै, उत्पादनको दिनमा यसले औसत घरमा बिजुली आपूर्ति गर्न सक्दछ over 66 बर्ष भन्दा बढी को लागी.
म्याड्रिडको टोरेस किओ भन्दा ठूलो र मेक्सिकोको टोरे मेयर जत्तिकै तिनीहरूको परिधि लन्डनमा लन्डन आईको मेटल पा wheel्ग्रा भन्दा ठूलो छ। यो टर्बाइन यो विकास हो V164-8.0 मेगावाट, एक हावा टर्बाइन पहिले नै रेकर्ड तोडियो २०१ 2014 मा र यसले १,16.000,००० बेलायती घरपरिवारलाई शक्ति दिन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » पवन टरबाइन वा पवनचक्कीले कसरी काम गर्छ?
म एडिलबर्टोबाट km० किलोमिटर ख्याल राख्छु
Ose लाई जवाफ दिनुहोस्
बल्ब बिभिन्न प्रकार, कुन छनौट गर्न को लागी?